Ny manampahefana misahana ny fizahan-tany ao Monaco dia mandray ny filoha vaovao sy lefitra lefitra
Home » Ny olona ao amin'ny Travel & fizahan-tany » Ny manampahefana misahana ny fizahan-tany ao Monaco dia mandray ny filoha vaovao sy lefitra lefitra
Ekipa vaovao notendrena, ho filohan'ny Fahefana fizahan-tany sy fitsangatsanganana ataon'ny governemanta Monaco. Andriamatoa Guy Antognelli, Tale lefitra teo aloha dia lasa filohan'ny fizahantany Monaco vaovao ary Ramatoa Sandrine Camia, izay filohan'ny birao Monaco Convention nandritra ny fito taona lasa, dia lasa Tale lefitra.
Ramatoa Camia dia manana traikefa matanjaka amin'ny fizahan-tany; 20 taona izy no niasa tamina marika hotely lafo vidy toy ny Hotel Lutetia any Paris sy Hotel Martinez any Cannes, izay samy fananan'ny Taittinger Family. Nanana ny toeran'ny talen'ny Sales, Marketing ary ny fifandraisana amin'ny hotely mihaja roa tsy miankina izy, Hotel Royal Riviera any Saint-Jean Cap-Ferrat ary Hotel Metropole Monte-Carlo. Tamin'ny taona 2011 dia notendrena ho lehiben'ny Birao Fifanarahana Monaco izy ary niandraikitra ny fampiroboroboana sy ny fampandrosoana ny MICE, teo am-panaovana fitaovam-pifandraisana sy marketing vaovao ary hiantohana ny tsy fivadihan'ny mpanjifa tsara indrindra.
Ramatoa Camia momba ny nanendrena azy ho Tale lefitra: ”Fanamby vaovao io ary fanekena ny asa vita tao amin'ny Bureau Bureau. Tato anatin'ny fito taona lasa izay, be dia be ny zavatra niainana sy fahombiazana. ”
Taorinan'ny nahazoany diplaoma tao amin'ny injenieran'ny fitantanam-bola tao amin'ny Oniversiten'i Nice-Sophia-Antipolis, Andriamatoa Antognelli dia nanomboka ny asany tao amin'ny sampana Monegasque an'ny banky tsy miankina Suisse, voalohany tao amin'ny birao ambadika ary avy eo amin'ny departemanta fitantanana risika sy maso anatiny.
Nandritra ny 10 taona manaraka, nandray anjara tamin'ny fampandrosoana ny orinasam-piantohana iray tany Monaco izy, nitantana portfolio-mpanjifa avo lenta amin'ny alàlan'ny fahaizany ara-bola ary koa ny fahaizany ara-tsosialy.
Tamin'ny taona 2011, voatendry ho Lehiben'ny Departemantan'ny statistikan'ny governemanta Monaco Tourist & Convention Authority izy. Nandray anjara tamin'ny fampandrosoana ity serivisy ity izy ary nanitatra ny sehatry ny asany tamin'ny faharanitan-tsaina stratejika sy fifaninanana.
Tamin'ny taona 2015 dia nandray ny toeran'ny Tale lefitra izy ary niara-niasa tamin'ny fiaraha-miasa mihidy amin'ny serivisy rehetra amin'ny fampiroboroboana sy fampiroboroboana ny fizahan-tany ao amin'ny Principality.
Andriamatoa Antognelli momba ny fanendrena azy ho filoham-pirenena: ?? Ity fanendrena ity dia fanekena ny asako sy fanambarana fitokisana avy amin'ny governemanta. Manantena indrindra aho ny hiara-hiasa amin'ny ekipa nanolo-tena hampiroborobo ny toerana aleha ary nahitana vokatra tsara nandritra izay taona lasa izay.
Ny tanjoko dia ny hitarika ny iraka rehetra ataon'ny Monaco Government Tourist & Convention Authority hiantohana ny fizahan-tany avo lenta mandritra ny taona ary hampitombo ny tombony ara-toekarena ho an'ny toerana haleha.
Niara-niasa akaiky foana tamin'ny mpiara-miombon'antoka rehetra eo amin'ny sehatry ny fizahantany Principality izahay.
Tsy maintsy manaparitaka fitaovana vaovao ao anatin'ny rafitra voafaritra ho fampiroboroboana ny toerana haleha isika, mba hanatsarana ny vokatra tsara amin'ny fizahantany ao amin'ny Principality. "
Iberostar Hotels & Resorts dia mandefa famandrihana am-peo miaraka amin'i 'Google Assistant'
ILTM Amerika Latina 2019: Firaketana ny isan'ny agents avy amin'ny toerana vaovao